निर्वाचनमा देखिएका कटु सत्यतथ्य - Ratopati
नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने नेपाली उखानलाई उछिनेर नेपालका ठूला हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते प्रथम चरणमा सम्पन्न निवार्चनमा निर्वाचन आचार संहिता र नागरिकका कानुनी तथा मौलिक हक तोड्ने काम गरे । यी दलहरुले आफूलाई ठूला दलमा घोषित गरे पनि साना दलहरुले मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारलाई जबर्जस्ती रोक्ने र फिर्ता गराउने काम गरे ।
उनीहरुको यो क्रियाकलाप लोकतन्त्र, मानव अधिकार सविधान र नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी कृयाकलाप थियो । भरतपुरमा यी दलहरुले निहित दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि जनादेश प्राप्त ब्लेट च्यातने काम भयो । यी व्यवहारले ठूला भनिएका दलहरुको अनुहार उदाङ्गीएको छ । उनीहरुबाट निःस्वार्थ विकास र सुशासन भोलिका दिनहरुमा कति सम्भव छ । नेपाली जनताले विचार गर्ने बेला आएको छ । तर पनि नागरिकको राजनीतिक तथा मौलिक हक खोसिँदा निर्वाचन आयोग र मानव अधिकारवादी तथा पर्यवक्षकहरु मुकदर्शक भएर बस्नुले नेपालमा खासै लोकतन्त्रको विकास भएको मान्न सकिँदैन ।
यी ठूला पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका—६ मा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तर्फबाट वडा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिइएकी सुनकला बूढा र चन्दननाथ—३ मा वडा अध्यक्षका लागि उम्मेदवारका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेका बाटुलो सार्कीलाई विभिन्न बहाना र त्रासमा नेकपा ऐमालेका कार्यकर्ताले उम्मेदवारी फिर्ता गराएर मुगुको रारा छायाँनाथ नगरपालिका वडा नम्बर १० मा नयाँ शक्तिका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारलाई हतोत्साहित गर्ने काम माओवादी केन्द्रका साथीहरुले गरे ।
निर्वाचन आयोग, संवैधानिक हक, मानवअधिकार र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदा पनि निर्वाचन आयोग चुप लागेर बसेको छ । त्यसैगरी जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता गरेका नयाँ शक्ति पार्टीका महेन्द्र बुढालाई माओवादी केन्द्रका साथीहरुले घेराबन्दी गरी उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाए । यी त भए ठूला पार्टी भनाउँदाहरुको निष्कृट र निकम्मा व्यवहारहरु । यी पार्टीहरुले नयाँ शक्तिलगायत भर्खरै निर्वाचनमा सहभागी भएका पार्टीलाई मत नदिन जस्ता गैर सैद्धान्तिक र गैरलोकतान्त्रिक प्रचार र हर्कतहरु वा भ्रमपूर्ण प्रचार कति गरे कति ।
उनीहरुको यस्ता घृणित र गैरराजनीतिक भ्रमहरु गाउँगाउँमा छरेको देख्दा साँच्चै उनीहरु राजनीतिक दल होइनन् भन्ने लागेको छ । निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई धम्काउने, नानाथरिका लोभप्रलोभन देखाउने जस्ता झुट्टा प्रचार प्रसार गर्दा पनि नेपाली मतदाताले उनीहरुलाई नै मत दिएर जिताउनुले नेपालको राजनीतिक अवस्था कता जाँदै सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजलाई झुट र आश्वासन पारेर राजनीति गरिरहेकाले त्यो परम्परा न हटनु दुःखद् हो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीका क्रममा प्रचार प्रसार गर्दा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार नन्दकुमार चौधरी र पार्टी केन्द्रीय परिषद् सदस्य होमप्रसाद शर्मामाथि केही दिन अगाडि माओवादी केन्द्रका साथीहरुले साङ्घातिक आक्रमण गरेर लोकतन्त्र, मानव अधिकार, निर्वाचन आचारसंहिता एवम् नागरिक स्वतन्त्रताको खील्ली उडाउने कार्य भएको छ । यस्तो कार्यको उल्लङ्घन गर्नेमाथि छानविन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउन नयाँ शक्ति पार्टीले निर्वाचन आयोगमा ध्याकर्षणसहितको उजुरी गरेको छ ।
तर निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्ने नगर्ने विषयमा आजसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन । त्यसैले भनिन्छ कहाँ नेपालमा सविधान, कानुन, मानवअधिकार छ । कसरी नेपालमा सुशासन र कानुनी शासन लागू गर्न सकिन्छ ? यी त भए शासक दलहरुद्वारा खुला रुपमा कानुन उल्लङ्घन र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गरिएका कार्यहरु । आन्तरिक रुपमा यस्ता कार्यहरु धेरै भएका छन् । उदारणका लागि निर्वाचनकै समयमा जनता तथा मतदातालाई मासुभात खुवाउने, जागिर मिलाई दिने, विकासका योजना घर नजिक ल्याई दिने, आफ्नो भनेको नमानेमा गाउँठाउँमा बस्न नदिने, विगतका दिनमा सरकारी सुविधा आफूले ल्याएको रवाफ देखाउने, निर्वाचनको समयमा विभिन्न प्रलोभनमा पार्टी अदलीबदली गराउने जस्ता साम, दाम र दण्डको नीति अपनाउने र विपक्षी पार्टीविरुद्ध गैरसैद्धान्तिक प्रचार प्रसार गर्ने आदि हर्कतहरु शासक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् । यस्ता विषयमा कति कारवाही कसले गर्ने ? नेपाली मतदाता वा अहिलेका शासकहरुले । नेपाली जनतालाई यस्ता दण्डनिय कार्यको सजाय गरेका जवाफ खोज्न कहाँ जाने ? विषयमा उनीहरुलाई जति सम्झायो, उति आगोमा ध्यू थपे जस्तो हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफैलाई सरम लाग्छ ।
यस्ता गैरकानुनी, गैरलोकतान्त्रिक र मावन अधिकार विरोधी क्रियाकलापको पर्दाफास गर्न वा उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नेपाली जनताले दोसा्रे चरणको निर्वाचनमा हराउने वा त्यस्ता पार्टीका उम्मेदवारलाई चिनेर मतदान नगर्नु नै लोकतान्त्रिक विकल्प हँन जान्छ । त्यतिले पनि भएन भने सचेत नेपाली जनताको सङ्गठित शक्तिले खुला आक्रमण गर्नुुको अर्को विकल्प छैन । यिनीहरुलाई यस्ता विषयमा जति बतायो त्यति स्यावासी दिए जस्तो हुन्छ । त्यसैले नेपाली जनताले पहिला ब्यालेटको माध्यमबाट हराउने र त्यसले नभए ब्यालेट सङ्गठित बलबाट परास्त गर्नुपर्छ ।
नेताका काला कर्तुत एकपछि अर्को पर्दाफास हुँदा पनि आफू नै ठीक र राम्रै छौँ भनेर झनै लज्जितै हुने गरी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यी नेताहरु आफै धामी आफै बोक्सी भएजस्तो गरिरहेका छन् । त्यस्तो गर्न नसक्ने पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता न घरको न घाटको भएका छन् । यो मुलुकमा जति अनैतिक र भ्रष्टाचारजन्य काम गरयो, त्यति नै उनीहरु समाजमा पूज्य भइरहेका छन् ? जुन पार्टीमा लागे पनि साम, दाम र दण्ड भेदको नीति अपनाउन नसक्ने व्यक्ति न नेता नै हुन सक्छ नअसली कार्यकर्ता ।
यो नेपालीको परापूर्वको लत नै हो । यहाँ त कसैले राष्ट्रको सम्पत्ति बुलेटबाट बटुले, कसैले ब्यालेटबाट । यी दुवै चरित्र नेपाली जनताका लागि घातक हुन् । अनि नेपालीका लागि यिनीहरु महासत्रु हुन् । यी दुवै चरित्रको अन्त्य गर्न सबै इमानदार शक्तिहरु एक हुनै पर्छ । यो देशमा कसैले पार्टी कार्यकर्ताहरुको भीड देखाएर लुटेका छन् । कसैले पार्टी एकता वा संयुक्त रुपमा कार्यगत एकताका नाममा फाइदा लिइरहेका छन् । कसैले सरकारका गएर कानुनी भ्रष्टाचार गरेका छन् । कसैले आफ्ना ठूला नेताको आडमा कर्मचारी सरुवा बढुवा र ठेक्का पट्टा गरेर लुटेका छन् ।
कसैले पार्टीको नेता भएर व्यापार व्यवसाय बढाएका छन् । कसैले ठूला नेताहरुसँग फोटा खिचाएर सामाजिक सज्जालबाट प्रचार प्रसार गरेर पैसा भजाएका छन् । कसैकसैले ठूला नेता र लेखकद्वारा प्रकाशित पुस्तक बेचेर रकम जम्माम गरेका छन्? प्रदेश ,जिल्ला अध्यक्ष, सचिव आदि आदि भएर फाईदा वा लुट्ने गरेका छन् । आधुनिक युगमा भ्रटाचारका अनकौँ रुपहरुको विकास गरेर बाँच्ने वा लुट्ने गरेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारका अनेक रुप रङ्गले नेपाली समाज बर्बादै भएको छ । जता हेरे पनि भ्रष्टाचारै—भ्रष्टाचार देखिन्छ । कसरी हुन्छ निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन ? पार्टीहरुमा इमानदार, कर्मशील नैतिकवान र इज्जतदार कार्यकर्ताहरुको खटनपटनबाट पार्टी अध्यक्ष, सयोजक, सचिव, महासचिव वा सङ्गठन र विविध विभाग प्रमुखहरुले विज्ञ नेतृत्वको नाममा ग्रामीण कार्यकर्ताको शोषण पार्टी बाहिरभित्रबाट नेतृत्व तहमा बसेकाले फाइदा उठाइरहेका छन् । यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । जता हेरे पनि अनेक प्रकारका भष्टाचाका रुपहरु देखा परेका छन् ।
यसको नियन्त्रणको एक मात्र विकल्प नयाँ विचारको दृढ विकास र स्वतन्त्र पङ्क्तिबाट पार्टीमा आएका नव युवाको नेतृत्व विकास र दृढ निडर दूरदर्शी नेतृत्वको विकासले मात्र उचित स्थान लिन सकेमा मुलुक सुध्रन्छ । माथि उल्लेख गरिएका व्यवहार र कृयाकलापहरु चाहे नयाँ शक्ति पार्टीबाट भएका हुन वा माथि किटान गरिएका दलहरुबाट गरिएका हुन ती सबै प्रवुत्तिहरुको अन्त्य वा नियन्त्रण नगरिएसम्म भोलिका कुनै पनि निर्वाचन वा अन्य कार्यमा निष्पक्षता र शुद्धता आउन सक्ने छैनन् । यसमा सुधार वा परिवर्तन ल्याउन सबै क्षेत्र गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।